Tababarka Anshaxa - Carewell SEIU 503
Isku Diyaarinta Fasalka. Waynu ku soo dhaweeynaynaa oo waynu ku taageereynaa adiga iyo dhamaan ka qaybgalayaasha waxaynu idiin sheegeynaa inaad imaataan fasalka idinkoo soo nastay oo diyaar u ah inaad wax barataan. Waxaad u baahan doontaan qalabka gacanta lagu qaato qayb kamid ah koorsada. Tusaalayaasha qalabka gacanta lagu qaadan karo waxaa kamid ah taleefoon, tablet, ama laptop. Fadlan la imoow qalabkaada gacanta lagu qaado oo codka ka xir markaad timaado. Carewell waxay diyaarin doontaa tiro cayiman oo ah qalabkan oo la amaahan doono hadii aadan haysanin qalabka gacanta lagu qaato. Waqtiyo nasasho oo qorsheesan ayaa la qaadan doonaa, sikaste ay ahaataba, qado lama bixin doono inta lagu jiro tabbabarka.
Soo Xaadiridda iyo Soo Daahidda. Fadlan qorsheyso inaad timaado 10 daqiiqo kahor inta fasalka uusan bilaabanin. Hadii aad timaado wax ka badan 10 daqiiqo kadib markuu cashirka bilaawdo, ma awoodi doontid inaad ka qaybqaadato waxaana lagu fari doonaa inaad markale qorsheysato.
Habdhaqanka Qolka Fasalka. Si loo hubiyo jawi waxbarasho oo u wanaagsan dhamaan soo xaadirayaasha, fadlan ha isticmaalin waxyaabaha carfa ee mashquulka keeni kara. Fadlan sidookale ka warqab sida nadaafadaada shaqsiyeed ay u sameen karto waayo-aragnimada ka qaybgale kale qolka ee dhexdiisa. Fadlan noqo ka qayb gale ku firfircoonaada fasalka dhexdiisa oo xushmeeyo dadka kale. Sigaar cabidda iyo isticmaalka daroogada ama khamriga lagama oggala gudaha ama aggagaarka goobta faslka. Burburinta, xatooyada, iyo xadgudubka afka/jireed ee shaqaalaha ka qaybgalayaasha lama oggala. Waxaa lagu fari doonaa inaad baxdo hadii aad muujiso dhaqan carqalad leh oo si xun u saameeya badbaadada ama awooda waxbarasho ee dadka kale.
Dhaqanka onlaynka ah Loogu talagalay onlayn tababarka, waxaad la falgeli doontaa ka-qaybgalayaasha kale iyo tababarayaasha Carewell iyada oo loo marayo guddiga wada xaajoodka onlaynka ah iyo/ama wada hadalka fasalka. Waxaan kaa dooneynaa inaad ka noqoto qof wax soo saar leh oo xirfad leh dhammaan goobaha onleenka ah si aad gacan uga geysato abuurista jawi waxbarasho oo qanciyo dhammaan. Waxaan tirtiri doonaa wixii faallooyin qoraal ah ee jabiya Xeerkan Anshaxa ama soo bandhiga macluumaadka macaamiisha ee sirta ah. Waxaa khadka ka saari karnaa ardayda dagaal abuurka ah, aan daneeneynin dadka kale, hanjabaada leh, rabsahad abuurka ah, af-xumada leh, ama haddii kale si xun u saameeya jawiga waxbarashada.
Kala duwanaanshaha, Sinnaanta, iyo Ka Qaygelinta. Carewell SEIU 503 waxay aaminsan tahay deegaan kala duwanaansho, ka qaybgelin, iyo badbaado leh inuu yahay mid ay dhamaan shaqaalaha iyo ka qaybgalayaasha ku dareemayaan soo dhaweyn. Waxaan xushmeynaa oo aan qiimeeynaa waayo aragnimada noolasha ee kala duwan waxaana rabnaa inaan xaqiijino in dhamaan codadka la qiimeeyo. Ma aqbali doono dhibaateyn ama xoog sheegasho ka timaada shaqaalaha ama ka qaybgalayaasha.
SEIU Local 503 Training Partnership waxay ku qaabishaa ardayda isir, midab, asal qaran, iyo asal qoowmiyad kasta dhammaan xuquuqaha, mudnaanta, barnaamijyada, iyo hawlaha sida guud loogu xilsaaray ama loo diyaariyay ardayda barnaamijyada tabbabarka ee Partnership (Iskaashatada) Kuma kala takoorto iyada oo lagu salaynayo isir, midab, asal qaran, asal qowmiyad maamulka qaynuunadeeda waxbarashada, qaynuunadeeda qaabilaada iyo barnaamijyada kale ee dugsiga uu maamuulo.
Markaad ka qaybqaadato Tababarka Carewell SEIU 503, waxaad ogolaatay inaad hubiso cadaalada iyo badbaadada dhammaan ka qaybgalayaasha kale. Waxaad oggashahay inaad u hogaansanto Xeerka Anshaxa ee kore ee dhamaan qaybaha Carewell SEIU 503 Training, shaqsiyan iyo onleen labaduba. Hadii aadan u hogaansamin codsiyadan suuragalka ah, shaqaalaha Carewell ayaa qaadi doona tillaabooyinka habboon si ay u xalliyaan u hogaansanaan la’aanta Xeerkan Anshaxan. Hadii aad wax arimo ah ama su’aalo ka qabto Xeerkan Anshaxa, fadlan iimay noogu soo dir: carewellSEIU503Training@RISEpartnership.com